China Model No: Chinese Manufacture Automatic Control Y83 Series Hydraulic Metal Chip Briquetting Press Machine for Metal Recycling fekitori uye vatengesi | Mubatanidzwa Pamusoro
Hydraulic pressure 180-3000 Matani
Type Yakatwasuka kana yakatwasuka mhando
Operation PLC kutonga
Hydraulic scrap metal chip briquetting press machine ine mabhenefiti akanaka eindasitiri yekudzokorodza simbi. Mazuvano, kushomeka kwezviwanikwa idambudziko rakatarisana nenyika dzese. Hazvina mhosva kuti nyika dzichiri kusimukira kana dzakasimukira, maitiro ekuita zvakanakisa kudzokorodza inogara iri nyaya inopisa. Saka isu tinogadzira vertical type kana horizontal type hydraulic scrap metal chip briquetting press machine kuti vatengi vedu vabate nesimbi yavo yakarasika kuti isangane nezvinodiwa nevatengi vedu.
Hydraulic scrap metal chip briquetting press machine inonyanya kushandiswa kutsikirira marudzi ese esimbi marara (cast iron scrap, copper scrap, aluminum scrap, etc.) mumabhuroko kuburikidza neforoma, iyo iri nyore kutakurwa uye kurapwa kwesimbi. Hydraulic scrap metal chip briquetting press machine ndiyo yakanakira fekitori yemhangura nesimbi, isiri-ferrous simbi.
●Iyo sisitimu yakagadzirirwa ne-pre-leakage mudziyo kubvisa hydraulic shock.
● Midziyo yekutsanya yepamusoro, kuve nechokwadi chekugadzirwa kwemushandisi.
● Chikamu chemagetsi chinotora kunze kwenyika PLC otomatiki control system.
● Muviri mukuru unotora chimiro chesimbi, simba guru, kugadzikana kwakanaka, hazvidi kuisa anchoring screws.
● Hydraulic scrap metal chip briquetting press machine inotora hydraulic transmission, yakakwirira nyanzvi yevhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavhavha, kuyerera mugero, kuitira kuti dzvinyiriro kurasikirwa sisitimu kuduku, kubvisa kusaipira leakage.
● Adopt cartridge valve, electro-hydraulic proportional valve uye mafuta circuit design, kuitira kuti hydraulic system ive yakakwana, kunyange kana iri nguva yakareba inorema, chirongwa chacho hachizoratidziki kunze kwekutonga.
● Yedu hydraulic metal baler machine inogona kukubatsira kuchengetedza basa, kuvandudza simbi kupora, kuwedzera mutengo wekutengesa uye kuvandudza purofiti.
●Vatengi vanogona kugadzirisa mapekeji uye saizi zvinoenderana nezvavanoda.
Hydraulic scrap metal chip briquetting press machine ine inogadziriswa mavara ekuratidzira, kutevedzana kwechiito uye nguva yega yega yekuita inodzorwa zvizere nePLC system, uye inogona kugadziriswa chero nguva nemushandisi, zviri nyore, zviri nyore uye zviri nyore kunzwisisa.
Hydraulic scrap metal chip briquetting press machine ine conveyor, inogona kuona otomatiki kudya, kuwedzera zuva nezuva uye kuchengetedza manpower.
Iyo huru hydraulic cylinder inobvisa simbi castings uye inobvisa dzingangove njodzi dzekuchengetedza. Ita shuwa hupenyu hwebasa uye kuchengetedzeka kwemidziyo. Kufananidza mold furemu uye mold, kudzvanya pamusoro nehunyanzvi dhizaini ine yepamusoro yekugadzirisa kugona ndiyo vimbiso yekunaka kwekunaka kwemidziyo. Iyo punch ye mold uye yekutsikirira yakashongedzerwa nepamusoro simba kupfeka-inodzivirira simbi inogona kukurumidza kutsiviwa. Iyo yekumberi yekupedzisira yemuenzaniso LINDUR punch yakashongedzerwa nekupfeka-inodzivirira punch press ring kuitira nyore disassembly uye kuisa, kuitira kuti hupenyu hwayo hwebasa huwedzere. Zvikamu zvine chekuita nazvo zvakaomeswa zvakanyanya kana kugadzirwa pazvinenge zvakakodzera.
Hydraulic scrap metal chip briquetting press machine inoumbwa nemota, hydraulic pombi, pombi yekudzivirira mudziyo, nyanzvi yekudzora valve block uye pombi system yakabatana ne block press. Kugadzira kunonzwisisika, kugadzikana kwehutano. Yakashongedzerwa neinotonhorera system, kudzivirira michina haigone kushanda nguva dzose nekuda kwekupisa kwemafuta.
Φ120 x .50~70)
Yedu Hydraulic scrap metal chip briquetting press muchina inopa tsika ine mukurumbira mhando muchina zvikamu, tanga tichishandira pamwe nevakawanda vane mukurumbira pasi rose brand supplier, seSIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI uye zvichingodaro kweanopfuura makore gumi.
Yedu Hydraulic scrap metal chip briquetting press machine inoshandiswa zvakanyanya muindastiri inotevera:
● Yedu Hydraulic scrap metal chip briquetting press machine inokodzera mabhizimisi makuru esimbi,
●Hombe foundry simba remhepo zvikamu foundry enterprises.
● Vagadziri vemhangura uye aluminium zvigadzirwa.
Hydraulic scrap metal chip briquetting press machine's musimboti wekushanda uri kuburikidza nefeed cylinder mold sleeve kubva kune hopper kuti uwedzere michina yakagadzirwa, ita iyo yekumusoro kufa kudzika kudzvinyirirwa pazvinhu inomanikidzwa kuisirwa system uye kudzoka 1 ~ 2 masekondi, kuburitsa, kusunda mafuta silinda kudzoka mukati. nzvimbo, pasi yokumusoro kufa achafa seti simbi briquetting extrusion mhango, kusundira mberi humburumbira achavhura mhango, briquetting kumanikidzwa humburumbira kudzoka kutenderera kune rinotevera basa. Kuyerera kwekushanda: advanced feed cylinder uye pressure material cylinder (master cylinder) yakadzika compaction, pressure material cylinder kudzoka 1 ~ 2 seconds - kusunda silinda yemafuta (inosvuta block cylinder) inotarisirwa kudzoka -- pressure cylinder downward ejection pressure chidimbu che -- pushing cylinder. yakatangwa kumberi danho rekumanikidza chidimbu che -- material feed silinda yadzoka, muchikamu chebasa chinotevera.
Isu tichashandisa yakaputirwa firimu kurongedza uye mapuranga kurongedza kuchengetedza yedu hydraulic scrap metal chip briquetting press muchina.
Tarisa Hydraulic Scrap Metal Chip Briquetting Press Machine yeMetal Recycling in Action!
Zvakapfuura: Muenzaniso Kwete: Chinese Manufacture Q91Y Series Hydraulic scrap simbi inorema basa rekugera muchina
Zvinotevera: Muenzaniso Kwete: Chinese Manufacture Automatic Control Y81 Series Hydraulic Scrap Metal Press Aluminium Baler Machine yeMetal Press Recycling
Y81 Hydraulic Baler, Homemade Cardboard Baler, Pop-Pamusoro Inogona Baler Equipment, Leaf Compactor uye Baler, Zvimedu Metal Compactor, Aluminium Foil Baler Machine,